भोलि साउन २१ गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस्…..
August 4, 2020 1201
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) राज्य भाव’मा गोचर गर्ने चन्द्रमाले व्यापार फस्टाएर जानेछ भने समाजसेवा तथा कल्याणकारि काम गर्न सकिने हुँदा मान सम्मा’न तथा ईज्जत प्रतिष्ठामा बृद्धि हुनेछ । रोजगारीको शिलशिलामा नया गन्तब्य पहिल्याउन सकिनेछ ।
नोकरिमा सुगम स्थानमा स्थाना’न्तरणको प्रशस्त सम्भा’वना रहेकोछ । माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ भने पति पत्निबीच मायाको डोरो कसिलो भएर जानेछ । अध्ययन अध्या’पनमा चाहेजस्तो प्रगति गर्न सकिनेछ ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) नोकरीमा पदोन्नती हुनेछ भने सुगम स्थानमा स्थानान्तरणको प्रशस्त सम्भावना रहेकोछ । सन्तानको सुखमा मन रमाउनेछ भने आध्यात्मिक तथा धार्मिक क्षेत्र’मा समय खर्चनु पर्दा मन प्रशन्न रहनेछ ।
अध्ययन अध्या’पन तथा खोज मुलक क्षेत्रमा सफलता हात पार्न सकिनेछ भने राज्यबाट सम्मानित हुने ग्रहयोग रहे’कोछ । प्रेमका बाटाहरु फराकिला हुनेछन् भने जीवन साथिको पनि सहयोग पाइने हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) स्वास्थ्य’मा आउने समस्याका कारण दैनिक काम’हरु प्रभावित हुनेछन् । चिन्ता तथा छट्पटिले उर्जा तथा आत्मबिश्वासमा कमि ल्या’उनेछ । नगर्नु पर्ने काममा नै हात हाल्दा व्यवसायिक रुपमा घाटा लाग्नेछ ।
धन सम्पति तथा पैत्रिक धन ह’राउन तथा लुटिन सक्छ ध्यान दिनुहोला । भौतिक सम्पति त’था खनिज पदार्थको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला नराम्रा घट्ना घट्न सक्छ । माया प्रेममा धो’का हुनेछ ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) विपरित लिंग प्रतिको आकर्षण बढेर जानेछ भने बिलाशी बस्तुको’ प्रयोग मार्फत अरुको ध्यान केन्द्रित गर्न सकिनेछ । बौद्धिकता तथा बि’वेकको प्रयोग मार्फत काम गरि मनग्गे आम्दानि गर्न सकिनेछ ।
प्रेम प्रशंगमा खुलेर रमा’उन सकिनेछ भने दाम्पत्य जीवन सुदृढ हुनेछ । साझेदारि व्यावसायबाट मनग्गे धन लाभ हुने तथा पारिवारिक भेटघाटमा मिठो मसिलो भोजन ग्रहण गर्ने अवस’र प्राप्त हुनेछ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धिहरुलाई किना’रा लगाउँदै नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ । माया प्रेममा सामिप्य’ता बढ्नेछ भने पति पत्नीबी’च मायाको डोरो कसिलो भएर जानेछ । व्यवसा’यमा लगानी बढाई आम्दानिका स्रोतहरु बढाउन सकिनेछ ।
पुरानो रोग तथा समस्याहरु स्वत ठिक भएर जानेछन् । मामा तथा मावलीबाट तपाईँको काममा स’हयोग हुनेछ । पढाइ लेखाइमा अरुभन्दा अग्र पंतिमा तपा’ईँको नाम आउनेछ । अदालत’बाट आउने निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा आउने हुनाले एक किसिमको उमङग शरिरमा आउनेछ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) लामो सम’यदेखि थाति रहेको काम बन्नेछ भने विभिन्न अवसरको सदुपयोग गरि मनग्गे धन तथा सम्प’ति संग्रह गर्न सकिनेछ । आर्थिक मुद्दा’हरु हल भएर जानेछन् भने मित्रहरुको सहयोग रहनाले सकयमा काम’हरु बन्नेछन् ।
पढाइ लेखाइमा पहिले भन्दा सुधार भ’एर जानेछ भने अलि बढि मेहनत गर्दा नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ । भौतिक सम्पति तथा विलाशि बस्तुको प्रयोग गर्न पाईने हुदा मन प्रफुल्ल हुनेछ ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) समाज’सेवामा दिन बित्नेछ भने अरुको काम गरि प्रसन्न हुने समय रहेको छ । माया प्रेममा नचाहाँदा नचाहाँदै मनमुटाव सि’र्जना हुनेछ भने जीवन साथीसँग तिक्तता बढ्ने योग रहेकोछ । सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि स’मस्या आउन सक्छ ध्यान दिनुहोला ।
अध्ययन तथा अध्याप’नमा समय दिन नसक्दा अरुभन्दा पछि परिनेछ । अरुकै काममा समय खर्चिदा आफ्नो का’म थाति रहनेछ । कृषि तथा पशुपालनमा गरिएको लगा’निबाट मनग्गे आम्दानि हुनेछ ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) दौडधुप तथा लामो खटाईले मात्र कामरु सम्पादन हुनेछन् । पुराना मु’द्दाहरुको निर्णय तपाईँको पक्षमा नआउने तथा नया बिवा’दमा फस्ने योग रहेकोछ ।
उद्योग तथा व्यापा’रमा लगानि गर्ने अवसर आएपनि तत्काल भन्दा पनि पछिको लागि फाईदा हुनेछ । आफुभन्दा ठुला तथा प्रतिष्ठित व्याक्ति हरुसँग बिवाद बढ्ने योग रहेकोछ । सामा’जिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना विचारहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) व्यव’सायमा लगानि बढाई प्रशस्त आम्दानि गर्न सकिनेछ । बोलि’को प्रभाव बढ्ने हुँदा बोलेकै भरमा कामहरु सम्पादन हुनेछन् । खोज तथा अनुशन्धा’नको क्षेत्रमा ख’र्चियको समयबाट सका’रात्मक नतिजा आउने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ भने अध्यन तथा अध्यापनको क्षेत्रमा अरुभ’न्दा अगाडि बढि नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सकिनेछ ।
पछि सम्म आम्दानि हुने व्यावसा’यमा लगानि बढाउन सकिनेछ । पारिवारका साथ रहेर मिष्टान्न भोजन गर्ने अवसर मिल्नेछ । आफन्तबाट भनेजस्तो सहायोग पाईने हुँदा काम गर्न सहज हुनेछ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) क्षमता प्रदशन गरेर नाम तथा दा’म दुबै कमाउन सकिनेछ । अध्ययनमा सुधार भएर जानेछ भने अरुलाई पछाडि छो’डेर अग्र पंतिमा आउन सकिनेछ ।
मेहनेत गर्दा आटेको काम बन्नेछ भने जुझारु कार्यशैलिले लक्ष्य तथा गन्तब्य पहिल्याउन सहज हुनेछ । परिवारका साथ रमाईलो बाताबरणमा स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । समाजसेवामा समय दिन सक्दा मान सम्मानमा बृद्धि भएर जानेछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) प्रशास’न तथा राज्य पक्षसँग सम्बन्धित काम गर्दा ध्यान दिनुहोला समय मध्ययम रहेकोले समयमा काम नबन्ने तथा बिभिन्न अवस’रबाट ब’ञ्चित हुने योग रहेकोछ ।
गलत काम तथा क्रिर्याकलाप’लाई प्रश्रय दिनाले ईज्जत तथा प्रतिष्ठामा दाग लाग्न सक्छ । पढाई लेखाईमा मन नजादा अरुभन्दा पछि परिनेछ । माया प्रेममा धोका हुनेछ भने जीवन ‘साथि सँग अनाबस्यक विवाद हुन सक्छ ध्यान दिनुहोला ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) व्यापार व्यावासा’य फस्टाएर जानेछ भने धन आगमनको गतिलो योग रहेकोछ । बैक तथा बित्तिय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कारोबा’रहरु बढेर जानेछ । तरल पदार्थ तथा खनिज पदार्थको व्यापार व्याव’साय फस्टाएर जानेछ ।
प्रेममा रमाउन चाहने’हरुका लागि सम’य राम्रो रहेकोछ । पैत्रिक धन तथा सम्पतिको प्रयोग मार्फत मनग्गे आम्दानि हुनेछ । आर्थिक अवस्था राम्रो हुने हुनाले दैनिक फेरिनेछ ।
Prevआज कुन जिल्लामा कति संक्रमित भेटिए ? हेर्नुहोस् विवरण सहित
Nextआँशुमा कर्णाली प्रदेशका जनता, रबि पुगे गरिबका झुपडीमा, हेर्नुहोस् (यी ७ तस्बिर)
आज पनि घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पर्छ ? हेर्नुहोस्
१० वर्षको हुँदासम्म राम्रोसँग बोल्न नजान्ने नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति बाईडेनका १० रोचक पक्ष
टिकटकमा भाइरल ५ बर्षिय नानीको प्रतिभा, यस्तोसम्म गर्न सक्छिन (भिडियो हेर्नुहोस)
अचानक किन फेरीए महेश बस्नेत? केपी ओलीलाई नै लगाए यस्तो आ’रोप (भिडियो सहित)
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ : पढ्नु’होस् (89966)
बाबुको लास नउठ्दै ऋण असुल्न पुगेका साहुले छोरीको कुरा सुनेर उल्टै १५ लाख दिए ( हृदयस्पर्शी कहानी) (82627)
वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए (74545)
बिवाह पार्टी हुँदाहुँदै दुलाहाले दुलहीको तलको कपडा उचालेर भित्र टाउको छिराएपछि (भिडियो सहित) (69716)